Clublọ Sunset nke Sunset nabatara Songstress Lorrie Morgan October 2, 2021 - pisklak.net
Clublọ Sunset nke Sunset nabatara Songstress Lorrie Morgan October 2, 2021
Sunset Station nwere obi ụtọ ịkpọsa abụ nwanyị bụ Lorrie Morgan ga-egwu Club Madrid na Satọdee, Ọktọba 2, 2021 na 8 pm Tiketi na-amalite na $ 27.50 gbakwunyere ụgwọ bara uru wee gaa ire Friday, July 2 na 10 am
Songstress Lorrie Morgan ereela ihe karịrị nde nde asatọ gụnyere iri na anọ kachasị elu iri, albums iri na abụọ e dere ede na nwanyị anọ olu olu nke Year Awards. O gosipụtara akara ya ugbu a bụrụ ụkpụrụ mba na-adịghị agafe agafe, “Nkeji ise”, “ewezuga ụbọchị Mọnde”, “Ihe dị na Red”, “Lelee m”, na “Kedu akụkụ nke mba”, iji guzobe ebe ya dị ka obodo kpakpando-nwanyị nke oge a na-eme akụkọ egwu mba. A mụrụ Loretta Lynn Morgan ime egwu. Mgbe ọ dị afọ 13, o mere mmetụ mbụ na ebighi ebi ya na ụwa egwu egwu egwu mgbe ọ na-egwuri egwu na Grand Ole Opry, na-eme ka ọ bụrụ otu n’ime ọdụdụ nwa mere mbido ya na Mother Church of Country Music. Lorrie dere akụkọ ihe mere eme mgbe ọ ghọrọ onye otu Grand Ole Opry n’oge ọ dị afọ 24, onye nke ọdụdụ na-esonye. A kọwara ihe ịga nke ọma Lorrie site na ịhụnanya maka nnukwu egwu na ike ịre ya. N’ime afọ iri abụọ gara aga, usoro egwu bịara wee laa, Lorrie nọsiri ike n ‘onwe ya. Taa, Lorrie aghọwo isi nke nwanyị ịlụ nwanyị na nwanyị na-eme ọhụụ nke ụdị a ghọtara dị ka eze site n’aka ndị agbụrụ ya na ndị ọgbọ ya.
Tiketi nwere ike zụrụ na ọ bụla Station cha cha wardsgwọ Ọrụ Center, ma ọ bụ online na stationcasinoslive.com na ticketmaster.com. Maka ozi tupu ire ere, soro @stationcasinos na @sunsetstation na soshal midia.
Echiche Post: 10